विश्व संकट र विनाशको मूल कारण ‘पश्चिमा वैचारिक श्रेष्ठता’ !
समृद्ध शक्ति बन्ने कि पाताल भासिने - जोसंग यी दुबै कुरा छैनन्, त्यसको पतन नभई कसको हुन्छ ?
मौलिक दृष्टिकोण र विचारको महत्व – समृद्ध शक्ति बन्ने कि पाताल भासिने ?
मध्यपूर्व र अफगानिस्तानमा दशकौं देखिको आक्रमणपछि पनि पश्चिमाहरु किन असफल भए ? यसको एक मात्र कारण हो, पश्चिमाहरुले त्यहाँको जनजीवनलाई चिन्तन र विचारमा पथभ्रष्ट बनाउन असफल हुनु। ठूलो ईण्डियालाई पछि पार्न र नव-औपनिवेशिक नियन्त्रणमा लिईरहन पश्चिमाहरु किन सफल भए ? यसको एउटै कारण हो, पश्चिमाहरुले त्यहाँको जनजीवनलाई वैचारिक रुपमा पथभ्रष्ट बनाउन सफल हुनु।
भर्खरै रुसले आफूलाई पश्चिमाकरणबाट मुक्त भएको घोषणा गर्यो। चीन पशिल्यै देखि आफ्नै मौलिक सोंच र विचारमा चलेको छ। ईरानी राष्ट्रपतिले २ महिना अगाडि अमेरीका र ईरानका बीचमा युद्ध भएमा ईरानले जित्ने दाबी गर्दै यसको कारणका रुपमा ईरानको विकासको मौलिक जगलाई अघि सारेका थिए। ईरानको सोंच, विचार र प्राविधिक विका पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त भैसकेको छ भन्ने उनको दाबी थियो।
टर्कीको विकासको रफ्तार पनि यही प्रकृयाबाट अघि बढिरहेको छ। जसले आफूलाई आफ्नै मौलिक सोंच, विचार र प्रणालीको जगमा उभ्याएर अगाडि बढाए, ती सबै देशहरु पश्चिमा जगतलाई चुनौति दिंदै विश्व शक्तिका रुपमा उदाए। पश्चिमाकरणमा गर्व गर्ने देशहरु अहिले पातालमा छन्। दृष्टिकोण भनेको आँखा हो र विचार भनेको दिशा हो। जोसंग यी दुबै कुरा छैनन्, त्यसको पतन नभई कसको हुन्छ ?
पश्चिमा वैचारिक श्रेष्ठता : विश्व संकट र विनाशको मूल कारण
विचारधारात्मक भ्रष्टता हाम्रो यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। देश, समाज र राज्य व्यवस्थालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण पूर्ण रुपमा पश्चिमाकरण भएको छ। पश्चिमी शिक्षा, नव-औपनिवेशिक राज्य प्रणाली, गैरसरकारी संस्थाहरु आदि मार्फत् हाम्रो मौलिक विचारलाई समाप्त पारेर देश र यहाँका मानिसहरुको स्वदेशी पहिचानलाई निकै नै धमिलो बनाईसकेको छ।
पश्चिमाहरुको विचारधारा तिनैहरुलाई श्रेष्ठ र सबथोक मान्नु पर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। फलतः यसको प्रभावले हाम्रो आत्म विश्वास गुमाउन ठूलो भूमिका खेल्यो। यसको प्रभावबाट आज हामी आफूले केही गर्न नसक्ने, पश्चिमाहरुको देखासिकि सबैभन्दा उत्तम मार्ग रहेको र त्यही दुनियाँमा जान सकेको खण्डमा जीवन सबैभन्दा सुखि हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं।
विचाचरधारात्मक भ्रष्टता र आत्म विश्वास गुम्नुका कारणले उत्पीडितहरुप्रतिको हाम्रो व्यवहार अन्यायी हुँदै गएको छ। पश्चिमाहरुको वर्वरतालाई मानव अधिकारको रक्षा मान्ने, तिनीहरुको हस्तक्षेपको जायज प्रतिरोधलाई आतंकवाद ठान्ने, तिनीहरुको स्वार्थमा तय गरिएको प्रजातन्त्र र विकासको अत्याचारी परिभाषाप्रति गर्व गर्ने हाम्रा समस्याहरु यसैका उपजहरु हुन्।
बलशालीहरुको बल र धनलाई शिरोपर गर्ने यही दासतत्वपूर्ण चिन्तनका कारणले आज विश्व विग्रह, अशान्ति, द्वन्द र विध्वंशको चपेटामा परेको छ। ईर्ष्या, द्वेष, बदला, लुट र ध्वंशको विचारमा आधारित यही मनोदशाका कारणले विश्व पुनः अर्को महाविनाशको संघारमा पुग्दैछ। विश्व सहित नेपालको संकट पनि यसबाट छुटकारा लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नसंगै जोडिएको छ।
पश्चिमा साम्राज्यवादको अपराधिक उद्देश्यको पर्दाफास- आक्रमण गर्ने बहाना एउटा, आक्रमणको उद्देश्य अर्को
अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्दा जर्ज बुसको प्रशानले भनेको थियो कि हामीले अफगानिस्तानको पुनर्र्संरचाना, राष्ट्र निर्माण र प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि आक्रमण गरेका हों। अहिले अमेरीकी राष्ट्रपति वाईडेनले भनिरहेका छन् कि अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्नुको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण नभएर अमेरीका विरोधिहरुलाई ठिक पार्नु थियो। वाईडेनको भनाईप्रति यूरोपियनहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
नेटोको आक्रमणपछिका २० बर्षमा न अफगानिस्तानको पुनर्र्संरचना भयो, न राष्ट्र निर्माणको पहल भयो न त तिनीहरुले भने जसरी संविधान नै बन्यो। यो सबै भूmठको प्रचार आक्रमणको बहानाका लागि मात्र गरिएको थियो। ईराकमा पनिराष्ट्र संघको निर्णयलाई नमानेर झूठका भरमा आक्रमण थियो। सिरीया र लिवियाले अमेरीकी डलरमा तेलको ब्यापार नगर्ने निर्णय गरेपछि ती दुबै देशमा अमेरीकी आक्रमण भएको थियो।
अमेरीकन र यूरोपीयन साम्राज्यवादी आतंकवादीहरुले विश्वमा जहाँ जहाँ आक्रमण गरेका छन्, ती सबै बाहिर झूठ कुराको प्रचार गरेर लुट र दमनका लागि मात्र गरेका छन्। अफगानिस्तानबाट कायरतापूर्वक भाग्नै पर्ने अवस्था आएपछि वाईडेनले सत्यलाई ओकल्न बाध्य भएको मात्र हो। संकट बढ्दै गएपछि अमेरीकी र यूरोपेलीहरुका बीचमा भनाभन सुरु भएको छ। पश्चिमी जगत मानवता विरोधि आतंकको पर्याय हो।
अफगानिस्तानमा पराजित भएपछि तिनीहरुले आफ्नो अपराधिक साम्राज्यवादी मनोकांक्षालाई ढाकछोप गर्नका लागि अफगान घटनालाई राजनीतिक रङगमा रङ्गाउने खोजिरहेका छन्। अफगान घटनाले् त्यहाँ ची र रुसको प्रभुत्व बढ्ने र यसबाट त्यस क्षेत्रको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन बिग्रने भन्दै तिनीहरु अफगानिस्तानमा सकृय भैरहने बहाना खोजिरहेका छन्। नेपालमा पनि तिनीहरुको उद्देश्य यस्तै छ।